सुनसान पोखरा, व्यवसायी भन्छन्– ‘बैंकले पर्यटन क्षेत्रलाई खाल्डोमा धकेल्दैछ’ – AayoMail
सुनसान पोखरा, व्यवसायी भन्छन्– ‘बैंकले पर्यटन क्षेत्रलाई खाल्डोमा धकेल्दैछ’
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असार २५ गते ०:४१
कोरोना महामारी नदेखिएको भए अहिले पोखरेली व्यवसायी भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहेका हुन्थे। विदेशबाट आएका पाहुनालाई आतिथ्यता दिन्थे। तर, दुर्भाग्य परिस्थिति त्यस्तो छैन।
भएका पर्यटक पनि कति स्वदेश फर्किए। नेपाल आउन चाहेकाले नि धमाधम बुकिङ रद्ध गर्न थाले। अरु व्यवसाय लकडाउनपछि प्रभावित भए पनि पर्यटन व्यवसाय ६ महिनादेखि थलिएको छ।
पर्यटक देखिनुपर्ने समयमा अहिले पोखराको फेवा किनार र लेकसाइडका ‘स्ट्रिट’ सुनसान छन्। ती ठाउँमा पर्यटकका हँसिला मुहार कहिले देखिने हो अत्तोपत्तो छैन।
पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल भन्छन्, ‘लकडाउनले गर्दा आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय छ। जबसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थल नाका सहज हुन सक्दैन, तबसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ।’
आम्दानी शून्य रहेका बेला व्यवसायीलाई किस्ता र ब्याज तिर्न भन्दै बैंकबाट आइरहेको फोनले आक्रान्त पारेको छ। पोखरेली पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध २५ हजार मजदुर आम्दानीविहीन छन्। अध्यक्ष पोखरलले बैंकबाट मानसिक टर्चर दिने गरी व्यवसायीलाई फोन आइरहेको दुखेसो पोखे।
किस्ता र ब्याज तिर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरे बैंकलाई चाबी बुझाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना महामारीपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा साउनबाट तयारी थालिने अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए।
‘तालाचाबी बुझाउन व्यवसाय गरेका हैनौं, हामीलाई धकेल्दै धकेल्दै खाल्डोमा पर्ने अवस्थामा पु¥याउने भूमिका बैंकिङ संस्थाले खेलेको देखेका छौं,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘हामी खाल्डोमा जानु भनेको बैंक पनि खाल्डोमा जानु हो। त्यसैले उहाँहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ। नभए भोलि दबाबका कार्यक्रम र तालाचाबी बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ।’
घरजग्गा र अरु भौतिक संरचनासहित गरेर पोखराका होटलमा करिब १ खर्ब २५ अर्ब लगानी छ। ती होटलमा १५ हजार मजदुर छन्। होटलबाहेक पर्यटनसम्बद्ध अरु क्षेत्रमा कति लगानी छ भन्ने तथ्यांक पाउन गाह्रो छ। तर सबैथरी पर्यटन व्यवसायमा गरी पोखराको यो क्षेत्रमा २५ हजार मजदुर छन्।
पर्यटन क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने भएकाले आउँदो २ वर्षसम्म ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन्। किस्ता तथा ब्याजलाई परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म पुनर्तालिकीकरण, पुँजीकरण गर्न तथा पुनर्कर्जाको माध्यमबाट ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
उनीहरुले अर्थमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गभर्नर लगायतलाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाएका थिए। त्यस क्रममा व्यवसायीले संघीय सरकारको बजेटमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई छुट्याइएको १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन कोष माग राखेका छन्। उक्त रकम सबै प्रदेशलाई बराबर बाँड्नुको सट्टा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएकाले पोखरा पठाउनुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलले सुनाए।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको १ अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोषबाट पर्यटन व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
कामविहीन भएका मजदुर र व्यवसायीबीच सेवासुविधाको विषयमा कुनै प्रकारको असमझदारी नरहेको परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले बताए। लकडाउनले व्यवसाय ठप्प हुँदा मजदुरले चैतबाट तलब नपाएको उनले सुनाए। ‘फागुनसम्मको तलब क्लियर छ। तलबको विषयमा कुनै डिबेट छैन। आएपछि बसेर सल्लाह गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ उपाध्यक्ष भट्टराईले भने।
परिषदका पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराई कोभिडले पारेको प्रभावका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक चिन्तित नभएका कारणले समस्या खेप्नुपरेको बताउँछन्।
‘अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकजस्ता संस्थाले अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा नगर्दा व्यवसायी र मजदुर समस्यामा परेका छन्,’ सरकारप्रति आशावादी रहँदै उनले भने, ‘अहिले सबै बाँचौं र बचाउँको नीतितिर लाग्नुपर्छ। सरकार नै त्यसतर्फ लाग्छ भन्नेमा आशावादी छौं।’ ऋणको किस्ता तिर्ने समय पछि धकेलिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
व्यवसाय ठप्प रहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको किस्ता माग्न तारन्तार फोन गर्न थालेपछि पोखराका यातायात व्यवसायीले बैंकमा गाडीको चाबी बुझाउन सुरु गरेका छन्।
‘असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ’
पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ताकेता तथा मानसिक दबाब दिँदा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने बताउँछन्। पूर्ण रुपमा बन्दाबन्दी भएकाले कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तान गर्न असमर्थ रहेको उनले बताए।
विषम परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै आवश्यक समन्वय गरिदिन अनुरोधसहित संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ। राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल मार्फत राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ताकेता वा जोडबल नगर्न सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समन्वय गरिदिन अनुरोध गरिएको अध्यक्ष तुलाचनले जानकारी दिए।
संघका सचिव राजेन्द्र ढकालले व्यवसायीलाई अप्ठेरो अवस्थामा कर्जाको साँवा मागेर हतोत्साही बनाइएको बताए। उनले भने, ‘साथीहरु अहिले हतोत्साही भएका छन्, यस्तो बेला ताकेता बढाउनु कहाँसम्मको मानवीयता हो ?’
राष्ट्रिय बैंकका पोखरा शाखाका निर्देशक डा. पोखरेलले व्यवसायीका तर्फबाट राखिएका मागहरु जायज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पुर्नकर्जा कोष अझ ठूलो बनाउन व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ।